Ikholeji kunye namanyathelo okulungela kwamakhondo omsebenzi ukuba ngaba abafundi bakulungele na ukuphinda babelane ngobomi ngokufezekisa iziqinisekiso zabo zekholeji okanye ikhondo lomsebenzi ngelixa besesesekondari. Iikholeji okanye iziqinisekiso zomsebenzi zibandakanya ukugqitywa ngempumelelo kwesiqinisekiso esishishinini esivunyiweyo ukugqitywa ngempumelelo okungenani kweeyure ezintathu zeekholeji zenqanaba leekholeji; Amanqaku okuphumelela kwiimviwo zokuBekwa ngokuPhezulu; okanye amanqaku adlulayo kuvavanyo lweBaccalaureate yeHlabathi. Abafundi baphumelele kwelona qela lisandula ukugqitywa esikolweni ababhalisiweyo esikolweni babandakanywa xa kunikwa ingxelo yasekholejini kunye nolwazi lokulungela umsebenzi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Ngaba esi sikolo silungiselela kangakanani abafundi beekholeji kunye nomsebenzi?
Ikholeji kunye namanyathelo okulungela kwamakhondo omsebenzi nokuba ngaba abafundi bakulungele ukwenza imisebenzi yasecondary ngokufezekisa iziqinisekiso zekholeji okanye ikhondo lomsebenzi ngelixa bekwisikolo esiphakamileyo.
Abaphumeleleyo bafumana ikholeji okanye ikhondo lomsebenzi
I-avareji kaRhulumente 68.3%
Ipesenti yabafundi abapasa iimviwo ze-IB
Ipesenti yabafundi abapasa iimviwo ze-AP
Ipesenti yabafundi abaphumelela izifundo ezibini zamatyala
Ipesenti yabafundi abahola iziqinisekiso zemigangatho yemigangatho
Benza njani abafundi kwesi sikolo ngokuthelekiswa neethagethi zikarhulumente zekholeji nokulungela umsebenzi?
Ujoliso lwethutyana lubonakalisa inkqubela phambili elindelekileyo yokufezekisa iinjongo zexesha elide zikarhulumente zekholeji kunye nokulungela umsebenzi.
Ngaba abafundi badibana neekholeji kunye nokulungela umsebenzi xa bevavanywa ukulungela ikholeji?
Iimpawu zekholeji kunye nokuzimisela ukufundela umsebenzi zezona mpawu zincinci kulindeleke ukuba abafundi babe nethuba lokuphumelela ekholejini nakumakhondo omsebenzi.
I-avareji kaRhulumente 52.3%
I-avareji kaRhulumente 56.7%
Yeyiphi ipesenti yabafundi kwesi sikolo abathatha inxaxheba kwi-SAT nakwi-ACT?
Inkcazo yokuthathwa kwenxaxheba kwe-SAT kunye ne-ACT
Funda ngakumbi malunga nokulungela kwekholeji eIndiana. https://www.in.gov/che/2489.htm